नेपालमा लगाइएको चिनियाँ खोपबारे जान्नैपर्ने ६ कुरा – Khabarhouse
Khabar house | १५ आश्विन २०७८, शुक्रबार १७:०१ | Comments
काठमाडौं : नेपालमा साइनोफार्म समुह अन्तरगतको चिनियाँ खोप भेरोसेल लगाउने अभियान चलिरहेको छ । यो भ्याक्सिनबारे जान्नैपर्ने ६ कुराहरु पढ्न छुटाउनु भयो कि ?
यो भ्याक्सिन कति उमेरको व्यक्तिले लगाउन सक्छ ? यो भ्याक्सिन १८ बर्षभन्दा माथिकाहरुलाई लगाउन अनुमति दिइएको छ । मे ६ मा विश्व स्वास्थ्य संगठनले यो भ्याक्सिनलाई प्रयोगको अनुमति दिएको हो ।
ग’र्भवती महिलाले यो भ्याक्सिन लगाउन हुन्छ ? ग’र्भवती महिलाहरुमा भ्याक्सिनको प्रभावकारिता वा जोखिमबारे प्रयाप्त तथ्यांक अहिलेसम्म उपलब्ध छैन। तर यो भ्याक्सिन अन्य कैयन भ्याक्सिनमा नियमित प्रयोग हुने प्रणालीबाट बनाइएको र त्यसको प्रोफाइल गर्भवती महिलाहरु लगायतका लागि समेत सुरक्षित भएकाले गर्भवती महिलाले यो भ्याक्सिन गर्भवती महिलाहरुमा पनि प्रभावकारी र सुरक्षित हुने अपेक्षा छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि अन्तरिम रुपमा यो भ्याक्सिन ग’र्भवती म’हिलाहरुलाई पनि लगाउन सिफारिस गरेको छ । जो’खिमको तुलनामा गर्भवती महिलालाई भ्या’क्सिन लगाउँदा फाइदा धेरै हुने विश्व स्वास्थ्य संगठनको निष्कर्ष रहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले भ्याक्सिन लगाउनु अगाडि गर्भवती भए नभएको परीक्षण गर्न भने सिफारिस गरेको छैन ।
अरु कस्ले लगाउन सक्छ यो भ्याक्सिन ? विगतमा को’रो ना संक्रमण भएकाले पनि यो भ्याक्सिन लगाउन सक्छन्। सामान्यतया को’रो ना संक्रमणभएको ६ महिनाभित्र अर्को पटक संक्रमण हुने अवस्था असाधारण भएकाले संक्रमण भएको ६ महिनापछिमात्र भ्याक्सिन लगाउँदा उपयुक्त हुने सुझाव छ । तर जहाँ कोरोनाका नयाँ प्रकारहरु फैलिरहेका छन्, त्यहाँ भने ६ महिना नकुर्न सुझाव दिइएको छ ।
यो भ्याक्सिनको प्रभावकारिता अन्य बयस्क महिलाहरु जस्तै स्तनपान गराउने महिलाहरुमा पनि उस्तै हुने अपेक्षा गरिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले अन्य महिलाहरुजस्तै स्तनपान गराउने महिलालाई पनि भ्याक्सिन लगाउन सिफारिस गरेको छ । भ्याक्सिन लगाएपनि स्त’नपान रोक्न विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको छैन । एचआईभी संक्रमितहरु को’रो नाबाट सिकि’स्त हुने उच्च जो’खिममा हुन्छन् । एचआईभी सं’क्रमितहरु परीक्षणमा सहभागी नभएपनि यो भ्याक्सिन एचआईभी सं’क्रमितहरुलाई प्राथमिकताका साथ दिन सिफारिस गरिएको छ ।
भ्याक्सिन कस्ले लगाउनु हुँदैन ? विगतमा खानेकुरा, भ्याक्सिन वा अन्य कुनै पनि प्रकारको एलर्जीको इतिहास भएकाहरुले यो भ्याक्सिन लगाउनु हुँदैन । ३८ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियस भन्दा धेरै शरीरको तापक्रम भएकाहरुलाई पनि तत्काल यो भ्याक्सिन नलगाउन सुझाव दिइएको छ । उनीहरुले ज्वरो निको भएपछि भने भ्याक्सिन लगाउन सक्नेछन् ।
यो भ्याक्सिन कति डोज लगाउनुपर्छ ? यो भ्याक्सिन दुईडोज लगाउनुपर्छ । हरेक डोज शुन्य दशमलव ५ मिलिलिटरको हुन्छ । पहिलो डोज लगाएको तीन देखि चार हप्ताभित्र दोश्रो डोज लगाउन विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको छ । यदि कसैले पहिलो डोज लगाएको तीनसाता अगाडि नै दोश्रो डोज लगाएको छ भने पनि दोहोराएर लगाउनु नपर्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको भनाई छ । चारहप्ता भन्दा ढिलो भएमा पनि यथाशीघ्र लगाउन सुझाव दिइएको छ। तर सबैलाई दुई डोज लगाउन सिफारिस गरिएको छ ।
के यो भ्याक्सिन सुरक्षित र प्रभावकारी छ ? १८ बर्षदेखि ६० बर्षसम्मका व्यक्तिलाई यो भ्याक्सिन सुरक्षित र प्रभावकारी भएको तथ्यांक रहेको छ । ६० बर्षमाथिका व्यक्ति परीक्षणमा कममात्र सहभागी भएकाले प्रयाप्त तथ्यांक छैन । तर कम उमेरका र बढी उमेरकाहरुमा सुरक्षाको अवस्थाबारे कुनै फरक नभएकाले यो भ्याक्सिन ६० बर्षमाथिकाहरुलाई पनि दिइएको छ । ६० बर्षमाथिकाहरुलाई भ्याक्सिन दिएका मुलुकहरुलाई उनीहरुको सुरक्षा अवस्थाको सकृय निगरानी राख्न सुझाव दिइएको छ ।
यो भ्याक्सिन २१ दिनको अन्तरालमा २ डोज लगाउँदा ७९ प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको छ । दोश्रो डोज लगाएको १४ दिनपछि लक्षणसहितको संक्रमण रोक्न यो ७९ प्रतिशत प्रभावकारी देखिएको हो । त्यस्तै अस्पताल भर्ना हुनेगरी सिकिस्त हुनबाट रोक्न पनि ७९ प्रतिशत प्रभावकारी रहेको छ । (विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट जारी जानकारीको खसोखासबाट अनौपचारिक अनुवाद)
सुत्नु अघि दूध पिउनु स्वास्थ्यका लागि रामवाण
पेट फुल्ने समस्या र कब्जियतबाट पीडित हुनु हुन्छ भने बिहान सधैं मेवा खानुहोस्
कस्तो केरा खानु हुँदैन ?
सुख्खा नरिवल खाँदा महिलालाई यति धेरै फाइदा !